Durcal, famantaranandro misy GPS ho an'ny ankizy sy olon-dehibe | Vaovao Gadget
Durcal, famantaranandro misy GPS ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
Miguel Hernandez | 30/03/2022 10:00 | Gadgets, General, hevitra, SmartWatch
Ny fifandraisan-davitra sy ny fahafaha-manao atolotra antsika mba hitadiavana olon-dehibe sy ankizy dia mora azo sy mora azo. Ny safidy farany tonga amin'ny tabilao famakafakana dia avy amin'ny orinasa vaovao antsoina ducal ary hojerentsika raha tena manolotra fahaiza-manao vaovao amin'ity sehatra ity.
Manadihady ny toetrany sy ny fiasany izahay mba hahafantarana ny toerana misy ny zanakao amin'ny fotoana rehetra ary mazava ho azy, ny zokiolonao koa.
2 Endri-javatra sy ny asany
Ny famantaranandro tsotra sy mahomby. Manana tontonana kely izy io saingy hita taratra, ao anatin'izany dia misy fampahalalana fototra toy ny bateria, ny dingana natao, ny daty ary ny fandrakofana finday. Kely customization amin'ity lafiny ity.
Ny brasele dia tena maivana, tafiditra ao anaty vatana silicone, Mijanona ao amin'ny tapany ambany ny tsimatra roa sy ny oksizenina sy ny pulse sensor. Ireo roa ireo no hany sensor izay ananan'ny fitaovana amin'ny haavon'ny fahaiza-manaony, ankoatra ireo toetra ara-teknika sisa horesahina etsy ambany.
Endri-javatra sy ny asany
Amin'ny ambaratonga famolavolana sy famokarana, ny famantaranandro dia mitady fahatsorana, minimalism sy fanoherana, tsy misy fihatsarambelatsihy. Ny efijery dia tsy mikasika, mba hivezivezy amin'ny safidy dia hanery ny bokotra afovoany, miaraka amin'ny fo mena ho famantarana. Amin'ny alalan'izany no ahitantsika ny fitepon'ny fo, ny oksizenina amin'ny ra, ny hafatra ary farany dia mamono ny famantaranandro.
Ny famantaranandro dia manana mikrô, fanamafisam-peo ary fandrakofana finday, araka ny voalazanay, dia manana ny karatra nanoSIM anao manokana dia tafiditra ao. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy manaisotra screws kely roa miaraka amin'ny screwdriver tafiditra. Amin'ny lafiny iray, manana fampitandremana fahalavoana marani-tsaina ihany koa izy, ny famantaranandro dia hahita azy ho azy ary mandefa fanairana amin'ny fampiharana Durcal.
Fotoana izao hiresahana momba ny fampiharana. Izany no zavatra voalohany tsy maintsy misintona, tanteraka Maimaim-poana ho an'ny Android sy iOS ary mamela antsika hahita ny famantaranandro, mitantana masontsivana sasany, mampifanaraka azy ary, mazava ho azy, mandray ireo fanairana voalaza teo aloha.
Ny dingan'ny fotoana tsotra izany:
Misintona ny fampiharana izahay ary mamorona kaonty amin'ny findainay
Mamelona ny famantaranandro izahay rehefa avy nampiditra ny nanoSIM
Izahay dia mijery ny barcode miaraka amin'ny IMEI
Ny famantaranandro sy ny fampiharana dia hirindra ho azy
Ny marina dia tena tsotra ny rafitra synchronization ary ankasitrahana izany. Na izany aza, tsy tokony hohadinointsika fa noho izany dia mila mampiditra karatra misy, ary mazava ho azy fa manao fifanarahana amin'ny drafitra Movistar Prosegur Alarms:
Fandoavana isam-bolana miaraka amin'ny fijanonana roa ambin'ny folo volana €19/volana
Fandoavana €190 isan-taona
Tokony hoheverintsika fa raha manafoana ny fanompoana alohan'ny taona isika, dia tsy maintsy mandoa ny karama isam-bolana ambiny hatramin'ny roa ambin'ny folo volana. Eny tokoa, ireo drafitra rehetra ireo dia ahitana ny famantaranandro maimaim-poana tanteraka.
Raha fintinina, ity rafitra fandoavam-bola amin'ny famandrihana ity dia ahafahantsika "hifehy" ny zanatsika, ny olon-dehibe ary ny miankina. Amin'ny fanindriana 3 segondra amin'ny bokotra tokana ananany, Afaka nanamarina ny fomba nifandraisan'ireo manam-pahaizana manokana momba ny Movistar Prosegur Alarms tao anatin'ny segondra vitsivitsy izahay mba hiantohana ny satan'ny mpampiasa ary miditra an-tsehatra raha ilaina, ankoatra ny:
Mahazoa fampandrenesana ao amin'ny fampiharana Durcal momba ny karazana fianjerana rehetra
Fakafakao ireo famantarana tena ilain'ny mpampiasa famantaranandro
Refesina ny dingana ary fehezo ny lalana nataon'ny GPS
Fampandrenesana ny fahatongavana sy ny fiaingana amin'ny toerana mahazatra
Toerana avy hatrany amin'ny GPS
Fahaleovan-tena eo amin'ny 15 andro
Tsy isalasalana fa fomba hafa ahafahana mahazo fiadanan-tsaina, amin'ny vidiny, mazava ho azy, fa manome izay ampanantenainy amin'ny lafiny fampisehoana sy fahaiza-manao, tsy misy fihatsarambelatsihy mihoatra noho izay omena ao amin'ny katalaogy. Azonao atao ny mividy izany mivantana amin'ny tranokalany na amin'ny fiantsoana ny 900 900 916 ary manaova fifanarahana ny drafitra izay mahafa-po anao indrindra, dia ho azonao ao anatin'ny 48 ora aorian'ny fifanarahana.
Navoaka tamin'ny: Diaben'ny 30 tamin'ny 2022
Fanovana farany: Diaben'ny 27 tamin'ny 2022
Tsy misy fanamboarana
fandoavana ny famandrihana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Durcal, famantaranandro misy GPS ho an'ny ankizy sy ny olon-dehibe
Azonao atao ny mamandrika ny Doogee S98 vaovao amin'ny vidiny tsara indrindra
SPC Smart Ultimate, safidy tena ara-toekarena